Kugara neInvestment yePortugal uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muPortugal ye:
● Kugara nekudyara muPortugal
● Ugari nekudyara kubva kuPortugal
● Visa yegoridhe muPortugal
● Pasipoti yechipiri kubva kuPortugal
● Kugara nekudyara kwePortugal nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muPortugal uye Magweta e Kugara patsva neInvestment muPortugal uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muPortugal zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara neveInvestment vamiririri vePortugal vanopa masevhisi ekugara nekudyara muPortugal, Kugara nehurongwa hwekudyara muPortugal, Kugara nehurongwa hwekudyara muPortugal, yechipiri Residency nekudyara muPortugal, mbiri Residency nekudyara muPortugal, ugari hwekugara nekugara nekudyara muPortugal. , Kugara zvachose nekudyara muPortugal, Kugara kwechinguva nekudyara muPortugal, Kugara nehurongwa hwekudyara muPortugal, Kugara nehurongwa hwekudyara muPortugal, Citizenship nekudyara muPortugal, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muPortugal, Citizenship nehurongwa hwekudyara muPortugal, wechipiri Citizenship nekudyara muPortugal, hunyanzvi hwehukama nekudyara muPortugal, kugara uye ugari nekudyara muPortugal, kugara uye ugari nekudyara muPortugal, zvirongwa zvehupfumi zvehupfumi muPortugal, Citizenship nehurongwa hwekudyara muPortugal, Citizenship nehurongwa hwekudyara muPortugal, wechipiri pasipoti mu Portugal, yechipiri mapasipoti mapasipoti muPortugal, chirongwa chechipiri chepasipoti muPortugal, pasipoti yechipiri muPortugal, pekugara uye pasipoti yechipiri muPortugal, pasipoti yechipiri yedhipatimendi muPortugal, pasipoti yechipiri nekudyara muPortugal, yechipiri ugari pasipoti muPortugal, chirongwa chechipiri chepasipoti Portugal, zvirongwa zvechipiri zvepasipoti muPortugal, vhiza yegoridhe muPortugal, mavhiza egoridhe muPortugal, zvirongwa zvendarama vhiza muPortugal, chirongwa chendarama vhiza muPortugal, vhiza yegoridhe vhiza muPortugal, chirongwa chechipiri chendarama vhiza muPortugal, vhiza mbiri yegoridhe muPortugal, ugari uye vhiza yegoridhe muPortugal, pekugara uye vhiza yegoridhe muPortugal, mugari vhiza mugari muPortugal, chirongwa chendarama vhiza muPortugal, zvirongwa zvegoridhe vhiza muPortugal
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muPortugal nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muPortugal yeResidency nekudyara: EUR 350,000
Nhanganyaya Portugal uye Residence neInvestment
Dzidza zvakawanda nezvePortugal
Portugal inokosheswa kwazvo nekufamba kwayo kwehupenyu ... uye muchiedza chemamiriro azvino! Urwu ndirwo rudzi rune hunyanzvi uye rune mutsa uye rwakagara rwuchinyorwa mumarudzi matatu makuru akamisikidzwa senzvimbo dzinonyanya kufadza kune vekare-patsika.
2019, Iyo Internations Expat Insider Survey yakamisa Portugal kutanga kugutsikana kwemunhu. Vanotsvaga avo vakatora mukudzokorora vakataura zvakanyanya zvakasarudzika zvemamiriro ekunze nemamiriro ekunze nepo hutano nekuchengetedzeka zvakawedzera zvibodzwa nevamwe vekare-patsva vachitaura kuti vakatora Portugal sezvo yaive nechengetedzo.
Kukurumidza uye nguva muPortugal zvinogona kusiyana nerudzi rwako rwekutanga. Izvo hazvionekwe sekusafunga kuratidza kumusoro mushure mekubhukwa, uye mapato anogona kunge akarongwa zvine hungwaru, semuenzaniso, 'mukutanga kwemanheru', panzvimbo peimwe nguva. Kunyange zvakadaro, kana paine mukana wekuti mumwe munhu ari kumhanyisa pamusoro pemaminitsi makumi matatu kunonoka kune imwe chiitiko kana musangano, zvinoziva kubata wako anokugamuchira kuti umuudze. Kuedza kunyatsoteerera uye kufunga kuti unganzwisisa sei zuva ravo nekufamba kwezuva kwehupenyu.
Nguva inowanzo chengetwa neawa remaawa makumi maviri nemana, saka yeuka izvi kana uchiverenga kuungana kana kuronga. VaPutukezi vane hukama hwakasimba kumhuri. Izvi zvinonyanya kujekerwa muvechidiki, avo vanocherekedza hupenyu pamwe nevabereki vavo kusvika makore makumi maviri apfuura uye zvino uyezve kusvika kumatatu avo. Izvi zvinogona kunge zviri nekuda kwezvikonzero zvemari, asi zvinowanzo svitswa obtrusively kuti kubika kwaamai uye mbatya dzakachena zvinozorodza zvikuru. Chokwadi, zvikwata zvemhuri zvePortugal zvichiri zvakajairika. Vakadzi vanoita kazhinji ruzhinji rwezvakakomberedza imba, zvinosanganisira kubika uye kuchenesa pakuungana uye nhandaro.
Kunzwisisa tsika dzechiPutukezi kuchakubatsira iwe kuwana nzvimbo nerudzi rwako rutsva. Mhuri dzechiPutukezi dzinoda kugamuchira vashanyi uye kana vanoenda kuzororo vachishanyira madhorobha avo kana mataundi, vanofarira kujairana navo. Iyi inogona kunge iri nzira isinganzwisisike yekubvunza, kusangana nevanhu vatsva, uye nekuwedzera kunzwisiswa kwekokorodzano muPortugal.
Pakugamuchira kumba kwemumwe munhu, zvakanaka kuti uunze komborero kadiki, semuenzaniso, waini, maruva, kana chimwe chinhu chinotapira. Muchiitiko chekuti iwe wakagamuchirwa pamusoro pekudya kwemanheru, edza kuratidza panguva, zvisinei nemaonero akasarudzika kusvika panguva murudzi. Kudya kwemanheru muPortugal kunogara kuchishandirwa kuma7-8 pm, uye masikati anotorwa pakati pa12-3 pm.
Chokwadi, maPutukezi vanopembererwa nerupo rwavo. Uchavawana vane moyo munyoro uye vachikoka uye kudzidza chikamu chemitauro iripedyo kuchaenda kure kubatsira kuziva nevanhu veko. Izvo zvakajairika mutengo wemitengo yezvinhu zvekutanga muPortugal ichavimba zvakanyanya pachidimbu cherudzi iwe waunofunga kugara mairi.
Iyo yakanaka condo muchikamu chakakurumbira cheguta rakakura inouya iri pasi pe € 1,123 paawa yekunyora mu2019. Iri izita rinotyisa kune chero munhu ari pamari yakatarwa nemari inokwana kuchengetedza mari uye mari yekurarama. Iwe unogona kutarisira kubhadhara mari yekugara munyika yakadaro zvakadaro asi Portugal ndiyo inomira pakati pedzimwe nzvimbo dzakakosha muEurope. Zvese izvi zvinokwezva zvakaita kuti Portugal ive imwe yenyika dzekupokana kune vechidiki vafambi vanoenda.
Pane mukana wekuti iwe wakamboshuvira kuenderera nehupenyu semufambi wepamberi, akasunungurwa kubva kune zvese zvisungo, panguva iyoyo Portugal inogona kukupa iwe zvese zvaunoda. Nekureruka zvine mwero, kugona kukuru kwewebhu, huwandu hwenzvimbo dzekushandira pamwe, uye netiweki inobudirira yemakomputa, hazvishamise kuti ndicho chemberi-pat chinangwa chesarudzo yemireniyamu. Portugal inzvimbo yekudenga inoshamisa uye, nekuda kweayo imwe yemhando yepamusoro nzvimbo, inowana North, West, uye South kuzvimba izvo zvinoreva kuti kune akavimbika surf yechikamu chakatsiga chegore.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yePortugal
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muPortugal
Kugara nekudyara kwePortugal
Portugal Goridhe Visa
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kwePortugal
Mushure memakore 6
Mazuva manomwe kusvika gumi nemana pagore
Ugari Hwenyika Hwakabvumirwa vagari vemuPortugal
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kwePortugal
Zvivakwa / Mupiro / Bhizinesi
Nei uchienda kune Residency nekudyara kwePortugal
Portugal inzvimbo inozivikanwa yekufamba, inhengo yenhengo yeEU ine zvikoro zvakanakisa nemayunivhesiti, yekutanga-kirasi yehutano hutano system, inofadza zvikuru uye inokurudzira yakazvimirira uye yekambani nharaunda, uye Schengen zone nhengo. Iyo yegoridhe yekugara purogiramu yemvumo ndeimwe yeanokurumidza uye anodhura sarudzo dziripo parizvino muEurope, zvichigonesa iye anenge achinyorera uye vepedyo vemhuri kuti vafambe vhiza-yemahara mukati meSchengen zone.
Mhuri yekupinda muPortugal
Maitiro ekubatana kwemhuri anotendera nhengo dzemhuri dzepedyo kugashira kugara kwechiPutukezi. Nhengo dzemhuri dzepedyo dzinoonekwa semurume kana mukadzi kana mukadzi, vana vasati vabva zera, vana vanovimba pamusoro pemakore gumi nemasere kana vasina kuroora uye vari kuronga kudzidza kuPortugal, pamwe nevabereki vako vanovimba newe. Dzimwe hama dzinogona kuve dzinokodzera pane kesi-ne-kesi pasi, zvichibva pamamiriro ako ega.
Uchapupu hweimba yekugara pamwe nemari inowanikwa inosvika EUR 12,000 pagore kune munhu mukuru uye EUR 6,000 yemwana mumwe nemumwe ichakumbirwa kupa.
Kugara nehurongwa hwekudyara muPortugal unokurudzira
Sezvo zvainge zvataurwa kare chirongwa ichi ndechimwe chinokurumidza kwazvo pasirese kutora inosvika 2-5 mwedzi. Kana iko kunyorera kuchisimbiswa kwemvumo yekugara kwenguva pfupi kupihwa kunoshanda kwegore rimwe. Kwemakore maviri imwe neimwe, izvi zvinogona kumutsiridzwa kaviri. Mushure memakore mashanu ekugara, iye anenge achinyorera ane mvumo yekupa chinzvimbo chekugara zvachose. Mushure megore rimwe rekugara zvachose, anenge achinyorera anokodzera kuve mugari wechiPutukezi chizvarwa uye pasipoti.
Iko hakuna kudiwa kwekugara muPortugal kana mvumo yekugara yangopihwa nekufamba kumwe chete kuenda kuPortugal panguva yekunyorera. Chinodiwa chete mazuva manomwe munyika mugore rekutanga, uye mazuva gumi nemana mukati memakore maviri anotevera.
Mari inodiwa kuPortugal
Satanhatu dzinogona kuita sarudzo dzinoitwa kuitira kuti uwane kugara kwechiPutukezi nekudyara. Semuenzaniso, muzvinashawo angangotenga zvivakwa nemari inokwana EUR 500000, oita mari yekudyara muaccortugal bank account kana kuita mari inoshanduka kweinosvika EUR 1 miriyoni, kugadzira angangoita gumi mabasa muPortugal, kupa angangoita EUR 10 350 yezviitiko zvekutsvaga, ipai kanokwana EUR 000 250 yekusimudzira hunyanzvi uye kuchengetedzwa kwetsika nhaka, kana kuisa mari inosvika EUR 000 500 yezviitiko zvekutsvaga.
Kunze kwekudyara, kubhadhara kwemutero wepamutemo weEUR20,000 kune mukuru investor uye EUR 4,000 yenhengo yega yega yemhuri inodiwa.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kwePortugal
Chikwata chedu che Residency nemaInvestment maAgent ePortugal uye Residency ne Investment Lawyers yePortugal inopa vatengi uye mhuri dzavo muPortugal nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuPortugal, kugara nekudyara kubva kuPortugal nedzimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuPortugal kana Golden Visa kubva kuPortugal kana ugari nekudyara kubva kuPortugal kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuPortugal, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Portugal kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muPortugal uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuPortugal nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari vePortugal:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yePortugal, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo zvePortugal, inokwanisika kudyara inosvika kune dzimwe nyika vanokumbira kuPortugal, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuPortugal, inokwanisika Residency nemagweta ekudyara ePortugal uye inokwanisika yekuenda kune dzimwe nyika kubvunza yakasimba kuPortugal
Kugara nekudyara kubva kuPortugal kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muPortugal kuenda ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuPortugal kuenda ku37 Nyika.
Pasipoti yechipiri kubva kuPortugal kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuPortugal kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nemapurogiramu ekudyara kubva kuPortugal.
Goridhe visa zvirongwa muPortugal kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuPortugal kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuPortugal kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuPortugal kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kwePortugal kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muPortugal nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muPortugal, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kwePortugal. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa muPortugal vane rekodhi rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muPortugal, kutora zvakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zvePortugal nemari yekudyara muzvivakwa muPortugal.
Unoda kuziva - Portugal Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta rePortugal kuchapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuPortugal. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuPortugal inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti ubve kuPortugal kana kuenda kuPortugal, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kuPortugal kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yePortugal uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kwePortugal, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kwePortugal isu taizoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuPortugal Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kwePortugal uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana zvako zvako uye zvemhuri yako zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kwePortugal zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zvePortugal.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kwePortugal changobvumidzwa, tinogovana newe nhau dzakanaka uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Residency nemasevhisi ekudyara muPortugal kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muPortugal:
Residency nebasa rekudyara kwePortugal hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera zvombo uye zvombo kubva kana kuPortugal.
Residency nezvirongwa zvekudyara zvePortugal hazvipi kupihwa kwehunyanzvi kuongororwa muPortugal kana maindasitiri espionage emapurogiramu ekudyara mukati kana kubva kana kuPortugal.
Residency nekutsvaga kwekudyara kwePortugal hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muPortugal.
Residency nerutsigiro rwekudyara yePortugal haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muPortugal.
Residency nebasa rekudyara kwePortugal haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana nyukireya muPortugal.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rwePortugal haruwanikwe kune vanhu vePortugal vanoita mukutengesa, kuchengetedza muPortugal, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yePortugal haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yePortugal haisi yezvitendero uye masangano avo muPortugal.
Residency nebasa rekudyara mu Putugaro haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muPortugal.
Kugara Kwedu magweta muPortugal haitsigire bhizinesi rekutengesa muzvinodhaka muPortugal.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi vePortugal neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muPortugal kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muPortugal.
Kugara nekudyara muPortugal nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muPortugal yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muPortugal.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye nezvinodiwa zviri pamutemo muPortugal, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kwePortugal inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira chePortugal.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuPortugal kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuPortugal.
Vanoziva Kugara nekudyara kwekutsvaga kwePortugal uye vamiririri vepamutemo vePortugal vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri vePortugal kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kwePortugal uye mushure mokubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuPortugal
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Portugal, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanak.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuPortugal kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verenga mutengo weKugara neInvestment kuPortugal
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kwePortugal ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi vePortugal, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kwePortugal uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yePortugal
Maitiro Ekubvumirwa Kwemvumo yePortugal
Kwekugara kwenguva pfupi muPortugal
Permanent Residence muPortugal
Embassies uye ma Consulates ePortugal
Kugara neInvestment muPortugal uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muPortugal nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuPortugal nekudyara mari, isu semumwe wako kuPortugal, tiripo kuti tipe yakawanda imwe sevhisi uye uye kana paungade muPortugal nemitengo inodhura.
Kunze kwekugara zvakare nekudyara kwekudyara kwePortugal, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muPortugal, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano vePortugal ichitigadzira shopu imwe yekumira yePortugal nenyika 106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye mabhizimusi kuPortugal mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kuPortugal nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-muPortugal nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muPortugal kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muPortugal yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muPortugal
Chero musimari anotamira kuPortugal angazoda account yako yebhangi muPortugal uye account yebhangi yekambani muPortugal, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muPortugal
Kana iwe uchida kubvunza muPortugal, ye mhinduro dzemadhijitari muPortugal senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muPortugal kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Portugal kana uchida kuenda tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muPortugal kutanga pakarepo muPortugal.
HR Services muPortugal
Our kambani yevashandi muPortugal inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muPortugal vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzePortugal
Bhizinesi foni nhare dzePortugal pamwe ne nhamba dzePortugal Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muPortugal
Accounting, kushingairira kwakakodzera muPortugal uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muPortugal
Setup bhizinesi muPortugal
Mushure meResidency nekudyara kuPortugal, setup bhizinesi mu Putugaro.
Isu tinopa pazasi zvataurwa IT mhinduro muPortugal
Kugadzira Webhu muPortugal
Ecommerce Kuvandudza muPortugal
Webhu kuvandudza muPortugal
Kuvandudza kweBlockchain muPortugal
App Kubudirira muPortugal
Software Kubudirira muPortugal
Magweta e Residency neInvestment muPortugal
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro dzePortugal uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuPortugal, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yePortugal ine vamiririri vakanakisa vekupinda zvakare muPortugal, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yePortugal ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzePortugal vanhu uye mhuri. Kugara kwedu neboka rekudyara kwePortugal kunopa mhinduro dzakagadziriswa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuPortugal, pamvumo yako yekugara muPortugal yabvumidzwa.
Simba regweta rePortugal rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevemagweta ekudyara muPortugal. Kana iwe uri muPortugal kana waronga kushanyira Portugal, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kwePortugal iri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yePortugal. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri wePortugal.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muPortugal
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muPortugal?
Kugara nekudyara kuPortugal, kunogona kutsanangurwa sekuwana, kugara kwePortugal kuburikidza nekudyara muhupfumi hwePortugal kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuPortugal, ugari nechirongwa chekudyara kwePortugal. inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara kwePortugal, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muPortugal, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muPortugal uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kwePortugal, vachishanda pekugara zvakanakisa nevamiririri vezvekudyara muPortugal, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muPortugal.
Kugara patsva nemabasa ekudyara kwePortugal | Kugara patsva nevamiriri vezvekudyara muPortugal | Kugara patsva nemagweta eInvestment muPortugal | Kugara nemagweta ekudyara muPortugal | Kugara nevezvekudyara mari kuPortugal
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muPortugal?
Ugari nekudyara kuPortugal, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hwePortugal kuburikidza nekudyara muhupfumi hwePortugal kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muPortugal. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuPortugal, ugari nehurongwa hwekudyara kwePortugal inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuPortugal, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muPortugal, ugari hwakanakisa nemagweta ezvekudyara muPortugal uye ugari hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kwePortugal. kuva chizvarwa chakanakisa nevamiririri vezvekudyara muPortugal, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika muPortugal.
Inodhura Mutyairi immigration services yePortugal | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika muPortugal | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muPortugal | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muPortugal | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda kuPortugal | Affordable immigration law firms kuPortugal
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muPortugal?
Yechipiri pasipoti muPortugal, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo wePortugal kuburikidza nekudyara muhupfumi hwePortugal kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuPortugal, yechipiri pasipoti chirongwa chePortugal chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi ePortugal, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epasirose muPortugal, magweta echipiri epasipoti muPortugal uye akanakisa echipiri mapasipoti mapareti ePortugal, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muPortugal, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muPortugal.
Chechipiri pasipoti masevhisi ePortugal | Chechipiri pasipoti vamiririri muPortugal | Yechipiri mapasipoti magweta muPortugal | Yechipiri mapasipoti magweta muPortugal | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuPortugal
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muPortugal?
Ndarama vhiza muPortugal, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yePortugal kuburikidza nekudyara muhupfumi hwePortugal kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuPortugal, chirongwa chendarama vhiza yePortugal inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi ePortugal, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muPortugal, akanakisa egoridhe vhiza magweta muPortugal uye akanakisa egoridhe vhiza varairidzi vePortugal, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muPortugal, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa mafemu muPortugal.
Goridhe visa services yePortugal | Ndarama vhiza vamiririri muPortugal | Magoridhe vhiza magweta muPortugal | Magoridhe vhiza magweta muPortugal | Goridhe vhiza varairidzi vePortugal
Ndechipi chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muPortugal?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muPortugal iEUR 350,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuPortugal yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muPortugal nevamiriri muPortugal vanopa rutsigiro rwekugara zvakare nekudyara muPortugal.
Kugara nekudyara kuPortugal kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuPortugal uye Kugara nekudyara mari inodiwa kuPortugal ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzana yeResidency neInvestment kuPortugal, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeipi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuPortugal kana investor visa kuPortugal?
Kugara nemabasa ekudyara mari kunogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuPortugal kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuPortugal kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuPortugal kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuPortugal kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuPortugal kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuPortugal kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuPortugal kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuPortugal kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuPortugal kubva kuNepal, Residency nekudyara kuPortugal kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuPortugal kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yePortugal
Kumbira kubvunza Mahara kweKugara Kwako neInvestment kuPortugal
Mazwi akakosha muKugara neInvestment yePortugal
Hurumende Yenyika yeAzores
TAP - Mapurisa echiPutukezi
Agency for the Portuguese Investment uye Kunze Kutengesa
Portuguese Yellow Mapeji
Camões - Kubatira pamwe neMutauro Sangano
European Jobho Kufambisa Portal
Institute of Registries uye Notaries
Portugal Bumbiro reConstitution
National Yekufambisa Network
Hurumende Yedunhu reMadeira
Nharaunda yePutukezi Mitauro Yemitauro
Dare Repamusoro-soro reRuramisiro
Kutama uye Border Service
Portuguese Magweta Association
Hutungamiri hwePutukezi Republic
Basa uye Professional Training Institute
Secretary of State of the Portuguese Nharaunda
Mutero uye Zviremera Zviremera
Ministry of Ehupfumi
Link to Dhipatimendi Rekupinda muPortugal , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muPortugal